Shuruudaha isticmaalka aaminka Ah U fiirso amniga markaad isticmaaleysid aminoguanidine hydrochloride, maxaa yeelay waa kiimiko sun ah. Haddii ay jirto dhibaato xagga nabadgelyada ah, waxaa laga yaabaa inay ku dhacdo khasaaro aan la qiyaasi karin. Kuwa soo socdaa waa shuruudaha isticmaalka aaminka ah. ...
Waxyaabaha kiimikada ah iyo isticmaalka p-hydroxybenzaldehyde
Waxyaabaha kiimikada ee p-hydroxybenzaldehyde P-hydroxybenzaldehyde ayaa si guul leh loogu isticmaalay daawada, waxyaabaha la isku qurxiyo, cuntada iyo beeraha kale, iyo kala duwanaanta dalabkeeda ayaa wali sii fideysa Haddii aad rabto inaad si buuxda u siiso waxqabadkeeda ...
Aminoguanidine bicarbonate waa kiimiko sun ah, sidaa darteed waxay leedahay shuruudo gaar ah keydinta caadiga ah. Waa lagama maarmaan in la keydiyo si loo hubiyo badbaadada alaabada iyo shaqaalaha. Waa kuwan taxaddarrada kaydinta qaarkood ee ay tahay inaad barato. 1 ...